सीकेले विखण्डनको नारा छाडेँ नभनी विश्वास गर्न मिल्छ ?
० तपाईं राजनीतिज्ञको साथसाथै राम्रो विश्लेषक पनि मानिनुहुन्छ । देशले अहिले लिइरहेको दिशाबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
–दुई तिहाइको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशलाई गति देला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । कुशासन हटाउँदै सुशासन दिने धेरैको अपेक्षा थियो । विकास र समृद्धिको नारा दिएकाले कतिपय जनता त्यो भ्रमजालमा पनि परेका थिए । तर, ओली सरकारले निराशा मात्रै योबीचमा बाँडेको छ । बरु जनअपेक्षाविपरीत देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्दै छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
० देशलाई द्वन्द्वतर्फ जान नदिन सरकारले हिंसात्मक गतिविधि गरेकालाई अंकुश लगाइरहेको छ । तर, तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ कि देश द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुँदैछ । अलि संगति मिलेन नि ?
–सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याउने भनेर ११ बुँदे सहमति गरेको सरकारले आफ्नो माग पूरा गराउन हत्या–हिंसाको बाटो समातेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई प्रतिबन्ध लगाएको छ, वार्ता र संवादको प्रयत्न नै नगरी । सरकारको यो कदमले देश मुठभेड र द्वन्द्वतर्फ जाँदैछ भन्ने मेरो विश्लेषण हो ।
० विप्लवको विषयमा म केही समयपछि आउँछु । सुरूमा सीके राउतसँगको ११ बुँदे सम्झौताबारे कुरा गरौं । देश विखण्डनको नारा बोकेको शक्ति र समूहलाई मूलधारमा ल्याउने सरकारको यो कदम त प्रशंसनीय नै छ नि होइन र ?
० सीके राउत विभाजन र हिंसाको मूल उद्देश्यबाट पछि हटेकै छैनन् । प्रतिकूल अवस्थाबाट अघि बढ्ने र अनुकूल हुनेबित्तिकै ती एजेन्डाहरू अघि बढाउने रणनीतिमा छन्, उनी । मधेसलाई स्वतन्त्र देश बनाउनका लागि जनमत संग्रह गर्ने भन्ने गोप्य सहमतिअनुरुप बरु उनलाई जनमत पार्टीको नामबाट सक्रिय हुने वातावरण यो सरकारले बनाएको छ । यो देश, जनता र संविधानको भावनाविपरीत छ ।
० सीके राउतले भनेजस्तो देश विभाजनका लागि जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको छैन भनेर सरकार प्रष्टीकरण दिइसकेको छ त ?
–सीके राउतलाई शान्ति र लोकतन्त्रमा ल्याउनु पर्छ । यसमा मेरो पूर्ण सहमति छ । तर, त्यसको पनि चरण र प्रक्रियाहरू हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा विखण्डनको नारा बोकेकाहरूमा बाटो बिराएको महसुस हुनुपर्छ । तर, सीकेले विखण्डनबारे प्रायश्चित नै नगरी सरकारले लुरुक्क परेर ११ बुँदे सम्झौता गरेको छ । मानौं सरकार आफैंले सीकेलाई अन्याय गरिरहेको छ ।
० सीकेको जनमत नामको पार्टी गठनबारे के टिप्पणी छ नि ?
–सीकेले सम्झौतापछि जनमत नामको पार्टी गठन गरेका छन् । यसलाई सरकार पक्षले सीकेको सच्चाइका रुपमा प्रचारवाजी गरिरहेका छन् । तर, उनको अभीष्ट अर्कै छ । बुझिएको छ कि निश्चित समयसम्म शान्तिपूर्वक स्थानीय एजेन्डा लिएर जाने र शक्ति आर्जन भइसकेपछि खुलेआम रुपमा स्वतन्त्र मधेस बनाउनुपर्छ भनेर जाइलाग्ने ।
० सीकेले पहिलो बुँदामा नै संविधान मान्छु भनेका छन् । देशको अखण्डताका लागि लड्ने प्रण गरेका छन् । हामी देख्दै छौं कि सहमतिअनुरुप नै उनले आफ्नो समूहको नामसमेत परिवर्तन गरिसकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि शंकाको सुविधा लिइरहनु असंगत र पूर्वाग्रहपूर्ण विश्लेषण भएन र ?
–पहिलो बुँदामा संविधान मान्ने कुरा छ । त्यो ठीक छ । तर, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्ने शब्दावली सहमतिको बुँदामा प्रयुक्त भएको छ । हामीले के बुझ्नु पर्छ भने नेपालमा स्वतन्त्र मधेस छैन । मेरो प्रश्न छ–सरकारले स्वतन्त्र मधेस शब्दावली प्रयोग गरेर के भन्न खोजेको ?
त्यसैगरी, १० औं नम्बर बुँदा केलाएर हेरौं । त्यसमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन शक्तिलाई लोकतान्त्रिक शक्ति मान्ने भनिएको छ । विगतमा सीकेले सञ्चालन गरेको गतिविधिका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्ने पनि उल्लेख छ । तथापि सीकेले विगतमा अंगीकार गरेको विचार गलत थियो भनेर कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन । सीकेले विखण्डनको नारा छाडेँ नभनी सरकारको एकोहोरो दाबी गर्दै सीके मूलधारमा आए भनेर विश्वास गर्न मिल्छ ? सीके स्वयंले पनि जनमत संग्रहमा सरकार सहमत भयो भनिरहेकाले यसका थुप्रै शंका गर्ने ठाउँ छन् ।
० सरकारले विखण्डनको नारा लियो भने कारबाही गर्छौं भनिरहेको छ त ?
–ती त सब भन्ने कुरा मात्रै हुन् ।
० तपाईंको मतलब यो सहमति देशको हितमा छैन उसो भए ?
–११ बुँदे सम्झौतामा ‘स्वतन्त्र मधेस’लाई कथित नभनिनु र उद्धरणभित्र नराखेर सरकारले स्वतन्त्र मधेसलाई वैधानिकता दिएको छ । १० औं बुँदामा स्वतन्त्र मधेसलाई लोकतान्त्रिक शक्ति मान्ने भनेकाले सरकारबाट नैतिक अधिकार पाएका छन् । हेर्दै जानुस्, सरकारसँगको यही सहमतिमा टेकेर सीकेले आउँदा दिनमा विखण्डनको नारा पुनः उराल्ने छन् ।
० देशको हितविपरीत सीकेसँग सम्झौता गर्ने बाध्यतामा सरकार किन पुग्यो होला ?
–सरकारले सीकेसँग किन यस्तो सम्झौता ग¥यो भन्ने एउटा जिज्ञासा यतिबेला उब्जेको छ । समयक्रममा त्यो खुल्दै जानेछ ।
० विप्लव प्रतिबन्धबारे पनि तपाईंले असन्तुष्टि जनाउनु भयो । संविधानविपरीतका गतिविधि रोक्नु सरकारको स्वभाविक दायित्व होइन र ?
–एकीकृत क्रान्तिको नाममा विप्लवको पार्टीले हत्या–हिंसा गरिरहेको छ । यो अस्वीकार्य कुरा हो । जनताको जन–धनको सुरक्षा गर्ने दायित्व स्वभाविकरुपमा सरकारकै हो । तर, दायित्व पूरा गर्ने नाममा जुन ढंगले त्यो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ, त्यो गलत छ ।
० सरकारले यहाँनिर गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो ?
–विप्लव समूह किन भड्किरहेको छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । उसका सम्भव मागलाई पूरा गर्ने र असम्भव मागबारे जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसो गर्न आवश्यक ठानेन । बरू निषेधको राजनीतिलाई उसले अंगीकार ग¥यो । सरकारले निषेध गरेसँगै त्यो समूहले प्रतिवाद गरिरहेको छ । प्रकारन्तमा यसले आफ्नो सुरक्षाका लागि कुनै अनुचित शक्तिको सहयोग र समर्थन ल्यायो भने त्यसले देशको द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ । यही कडीसँग जोडेर मैले देश द्वन्द्वतर्फ जाँदैछ भनेको हुँ ।
० वार्ता गर्ने भद्र सहमतिअनुसार विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ गरे पनि पछि धोका दिएको भनेर सरकार भन्दै छ । यो परिस्थितिमा उसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुलाई कसरी नाजायज भन्न मिल्छ ?
–सरकारले प्रतिबन्धित नभनीकनै विप्लव समूहलाई बार्तामा बोलाउने र गलत कामहरू प्रशासनिक ढंगले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो । तर, त्यसो नगरेर शक्ति प्रयोग गरिँदैछ । आफ्नो बचाउका लागि भित्र बाहिरका शक्तिको सहयोग खोज्नतिर लाग्यो भने देशमा हिंसा बढाइदिन्छ । सेनाले नै भन्दैछ कि विप्लव समूहलाई बलपूर्वक समाधान गर्न सकिँदैन, राजनीतिक ढंगले विश्वासमा लिनु उपयुक्त हुन्छ । तैपनि सरकार निषेधको नीति अख्तियार गरिरहेको छ । यो गलत छ । यसबारे पुनविर्नचार गर्नुपर्छ ।
० निषेध पछिको परिणामले कसैलाई फाइदा गर्दैन भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि सरकारले किन यस्तो नीति अख्तियार गरिरहेको छ त ?
–सरकारले किन बुझेन, त्यो मलाई कसरी थाहा हुन्छ ? सरकारसँग नै सोध्नूस् । तर, सरकारको रवैयाले देश द्वन्द्वतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
० देशमा एकपछि अर्को राजनीतिक घटनाक्रम विकास भइरहेका छन् । सीकेसँग ११ बुँदे सहमति भएको छ भने विप्लवको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यहीबीच
कांग्रेसका जिम्मेवार नेताबाटै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमबीच केही तादम्यता पनि छ कि ?
-नेपालको पछिल्लो एकीकरणदेखि अहिलेसम्म यहाँको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत छैन । सधैं खतरामै लड्किरहेको छ । भू–राजनीतिक हिसाबले नेपाल अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा छ । विश्व स्तरका दुई पावरहरूको अन्तरविरोध हामी र हाम्रो भूगोलबाट गुज्रन्छ । उत्तरसँग पारवहन सन्धि भएपनि हामी अझै व्यापारिक भारतवेष्ठित छौं । भारतबाट सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेश बिदा भएपनि त्यो मानसिकताले भारतीय शासकलाई छाडेको छैन । सिक्किम, बंगलादेशलगायतका छिमेकीसँगको काण्ड त्यसकै उदाहरण हुन् । स्वभाविकरुपमा अन्तर्राष्ट्रिमा चर्किएको द्वन्द्वको असर नेपालमा पर्नेवाला छ, परिरहेको छ । र, स्थिरताउन्मुख हुने अवस्था विथोल्न पनि प्रयास भइरहेका छन् । पछिल्ला सीके राउतदेखि विप्लवसम्मका शक्तिलाई गरिएको व्यवहार त्यसकै उपज हुन् ।
० पछिल्ला घटनाक्रम पनि यसकै कडी हुन् भन्ने तपाईंको मत हो ?
–अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको असर स्वभाविकरुपमा नेपालमा देख्न थालिएको छ । हालै मिलिनियम कर्पोरेशनको फण्डबाट सहयोग गर्ने कुरामा अमेरिकाले सर्त राखेको बाहिर आएको छ । हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले यस्ता कुरा अस्वीकार गर्न छाडेर ‘हाम्रो नीति नै यही हो’भनेर समर्थन गर्छन् । यसले नेपाल विस्तारै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा फस्दै गएको देखिन्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको लिगबाट हटेर क्रमिक ढंगले साम्राज्यवादी शक्तिहरूको सेवक र भ¥याङ बन्नेतर्फ लागिरहेको छ । यो हाम्रो देशको शान्ति, स्थिरिता, समृद्धिको बाधक हुन् ।
० धर्म, गणतन्त्रमाथि हिजो परिवर्तनका लागि लडेकाहरूले नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
–कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाको भाषण अहिले चर्चामा छ । त्यो मैले पनि सुनेँ । तर, भोलिपल्टै उनले धर्मबारे बोलेको हुँ, संघीयता र गणतन्त्रबारे जनमत मागेको होइन भनेर प्रष्टीकरण दिएका छन् । त्यसैले उनको भनाइमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ म देख्दिनँ ।
० भनेपछि धर्मबारे दक्षिणपन्थी पूर्वपञ्चदेखि कांग्रेसका केही नेताले राख्दै आएको धारणासँग तपाईंको कुरा त ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ त ?
–जायज कुरा जसले उठाए पनि ठीक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता आवश्यक नै होइन । नेपालको मौलिक, रैथाने धर्महरूबाट मानिसलाई धमान्तरण गराउने र नेपालको संस्कृति मास्दै पहिचान डुबाउने विदेशी मसिनरी शक्तिको अनुरुप यसलाई लागू गरिएको हो । देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने षड्यन्त्र मुताबिक नै यसलाई नेपालमा भित्र्याइएको हो ।
० सबै धर्म र संस्कृतिको स्वामित्व लिने कुरालाई तपाईंजस्तो विचार, दर्शन र सिद्धान्तबाट गाइडेड मान्छेले हेर्न मिल्छ ?
–नेपालमा कुनै एउटा धर्म विशेषसँग जोड्न पनि अनुचित हो । तर, अर्कातिर धर्मनिरपेक्ष भनेर वाह्य साम्राज्यवादी शक्तिहरूको योजनाअनुरुप धमान्तर गरेर देशको अस्तित्व संकटमा पार्नु पनि ठीक होइन । नेपाललाई बलपूर्वक धर्मान्तरण गर्न नहुने बहुधार्मिक, धार्मिक स्वतन्त्रतायुक्त र धार्मिक सहिष्णुतायुक्त परिकल्पना संविधानमा गर्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो । हामी देशलाई कुनै धर्म विशेषको सापेक्ष बन्ने पक्षमा छैनौं ।
० यही धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने सरकारमा तपाईं स्वयं सहभागी हुनुभयो । उतिबेला यी विषयहरू किन उठाउनु भएन ?
–हामीले मत भिन्नता राख्यौं । त्यो दर्ज छ । शक्ति नपुग्दा हाम्रो कुरा लागू भएन । नेकपा मालेले भन्नु भन्दा पनि विदेशी धर्मको संरक्षणमा त यो सरकार खुलेआम लागेकै छ नि । विदेशी धर्मलाई नेपालमा फैलाउन उसको ब्लेसिङ लिन करोडौं खर्च गरेर खुदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लागे । कसैको आशीर्वाद नै लिनु थियो भने यहीँका धर्मगुरूको लिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि त । एउटा सम्प्रदायको गुरू ल्याएर होलीवाइनबाट कथित शुद्ध पार्ने काममा आफ्नो काम छाडेर ३–३ दिन लाग्नु पर्दथ्यो ? यो त नेपालको रैथाने धर्मलाई निरत्साहन गरेर वाह्य धर्म भित्र्याउन रचिएको प्रपञ्च हो भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
० सरकारले गलत दिशा समात्यो भन्नु भयो । यो कुरा सरकारलाई सम्झाउने काम तपाईंहरूजस्तो राजनीतिक दल र नागरिक समाजले गर्नुपर्ने होइन ?
–हामी त निरन्तर भनिरहेका छौं । नेकपा माले यो शैली ठीक भएन, सुधार भनिरहेको छ । र, फेरि पनि भनिरहने छ । तर सरकार यी कुरा सुन्न तयार नै छैन ।
० सरकारको समीक्षा ?
–निर्वाचनताका अघि सारेका घोषणापत्रका आधारमा सरकार गरिबी, वेरोजगारी, पछौटेपनजस्ता समस्या हटाउन लाग्नुपर्दथ्यो । तर यसतर्फ उदासीन बन्दै छ । साँध सीमाना रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत यो सरकार गम्भीर छैन । सारमा भन्दा यो सरकार गन्तव्य पहिल्याउन नसकेर रुमल्लिएको छ ।
(२०७५ चैत ११ गतेको साँघु साप्ताहिकबाट)